Xisbiga WADDANI Oo Guud Ahaan Dalka Ku Soo Bandhigay Maalintiisii U Dambaysay Ololihiisa Doorashada - Xogside-news
Home WARARKA DALKA Xisbiga WADDANI Oo Guud Ahaan Dalka Ku Soo Bandhigay Maalintiisii U Dambaysay...
xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI oo ay maanta ahayd maalintiisi ugu dambaysay ee uu u lahaa kaltanka ololaha doorashada goleyaasha deegaanka iyo wakiillada ayaa isu soo baxyo la xidhiidha ololaha doorashada ka sameeyay guud ahaan gobollada dalka.
Gobollada xisbiga mucaaradka ee WADDANI taageerayaashiisu ay dhoola tuska ololaha doorashada isku sidkan ee wakiillada iyo deegaanka ka sameeyeen waxa ka mid ahaa gobolada Toghdeer, Awdal,Saaxil, Sanaag,Sool iyo Maroodijeex.
Waxa taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI kula hadlay fagaareyaal ku kala yaala gobolada iyo degmooyinka dalka masuuliytiin iyo musharaxiinta u taagan doorashooyinka goleyaasha wakiillada iyo deegaanka, iyagoo ka dalbaday inay codkooda siiyaan maalinta 31-ka may.
Sidoo kale, Xisbiga WADDANI ayaa ololaha doorashadda golayaasha deegaanka iyo Wakiilladda ku qabtay Magaalooyinka Saylac, Balli Gubadle, Sallaxley, Oodweyne, Caynaba, Ceel Afweyne Gabiley iyo badiba magaalooyinka dalka waxaana Taageerayaasha Xisbiga WADDANI la hadlay Murashixiinta golayaasha deegaanka iyo wakiillada oo ka waramay qorshayaasha ay ku horumarinayaan magaalooyinka ay ku tartamayaan iyo sida ay wax uga bedelayaan gollaha wakiilladda.
Previous articleQarax geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Baydhabo
Next articleAfar xubnood oo ka tirsan Congress-ka oo madaxweyne Joe Biden u diray codsi dib loo soo cusbooneysiiyo sharcigga badbaadinta ku-meel gaarka ah